Horumarinta Beeraha Soomaaliya - BBC Somali
Horumarinta Beeraha Soomaaliya
29 Sebtembar 2010
Image caption Beer ku taala Puntland
Tan iyo intii uu kordhay qiimaha cuntada ee addunka laba sano ka hor, maalgalinta beeraha ayaa noqotay waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay ka hadlaan waddamada horay u maray iyo kuwa soo koraya.
Shirkii Waddamada qaniga ah ee G8-ka ee sanadkii hore waxay ku dhawaaqeen dalalka qaniga ah, laba iyo toban billion oo dollar oo ah qorshe lagu maal galinayo saddexda sano ee soo socota beeraha wadamada soo koraya si oo loo kordhiyo wax soo saarka beeraha. Laba iyo tobanka billion ee dollar ee lagu maal galinayo beeraha waddamada soo koraya maraykanka wuxuu bixin doonaa affar billion oo dollar, Japan waxay bixin doontaa saddex billion oo dollar, inteeda kalena waxaa bixin doona dalalka Yurub iyo Canada.
Si loo kordhiyo wax soo saarka beeraha loona dhimo baahida iyo sicirka cuntada, Maraykanka wuxuu caawin doonaa waddamada ugu saboolsan adduunka beeralaydooda yar yar.
Image caption Wasiirka beeraha ee Somaliland Faarax Cilmi
Image caption Wasiirka beeraha ee Puntland Xasan Cabdi Maxamed
Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada ugu saboolsan adduunka ee ay cunto yarida ay ka jirto, wuxuuna Maraykanka sheegay toddobaadkii hore inuu ka caawinayo siday u hor marin lahaayeen beerahooda.
Waxyaabaha laga caawin doono beeralayda waxaa ka mid ah helida miraha la abuurto, waraabinta beeraha, bacriminta, daynta ay helaan beeralayda yar yar, suuq gaynta ta miraha beeraha sida jidadka, baqaarada cuntada lagu kaydiyo iyo u sahlida beeralayda iyo Suuqyada siday iskaga war qabi lahaayeen iyadoo la isticmaalayo teknolijiyada Computarka.
Marka hore Wasiirka beeraha ee Somaliland Faarax Cilmi ayaa maanta ka waramay wax soo saarka beeraha iyo markii ugu horreysay oo somaliland laga bilaabay Axaddii dhoweyd beerista bariiska.
Wasaaraha beeraha iyo waraabka Puntland waxay sheegtay inay jiraan baahiyo kala duwan oo u baahan in laga caawiyo si wax soo saarka gobolka kor loogu qaado.
Wasiirka beeraha ee Puntland Xasan Cabdi Maxamed ayaa arrintaas uga warramay wariyaha BBCda Axmed M.Cali.